7 matsva enhau nhema kuti amirire zhizha | Zvazvino Zvinyorwa
7 matsva ematsotsi emhando yekumirira zhizha
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Nhema nhema
A zhizha rakazara yekupisa, kupisa kupisa uye kumahombekombe, makomo kana runyararo kumba. Asi zvirokwazvo pachave nebhuku uye kuverenga kushoma. Zvakanaka yevaverengi vane rima ipapo enda vamwe nhau yerudzi rwevatema.
Kuenderera mberi kwekubudirira kwazvino senge izvo zve Paula hawkins o Sandrone Dazieri. Mamwe mazita emamwe mazita emoto chiremba Montalbano naCamilleri uye muongorori Rankin Rebus. Yechitatu mutikitivha Griessel de Deon Mayer, achangobva kutaurwa munyori weSouth Africa pano . Uye mamwe maviri emanyowani, imwe kubva kuGalician Xavier Quiroga uye imwe kubva kune yakadomwa Don unokunda. Ngatione kuti zvinonzwika sei.
1 Uori hwemapurisa - Don Winslow
2 Rufu Rwakaomeswa - Ian Rankin
3 Icarus - Deon Meyer
4 Dendere remhungu - Andrea Camilleri
5 Imba yeNazi - Xavier Quiroga
6 Yakanyorwa muMvura - Paula Hawkins
7 Mutumwa - Sandrone Dazieri
Uori hwemapurisa - Don Winslow
Panotengeswa June 22 iyo yakamirirwa kwenguva refu nyowani natenzi weAmerica Don unokunda, munyori anozivikanwa we Simba rembwa y Cartel. Chinyorwa chakajeka chisingasiye nzvimbo yekusahadzika nezve zvakatimirira.
Denny Malone inozivikanwa kwazvo New York Dhipatimendi reMapurisa sergeant uye mutungamiri we "Chikwata". Ivo ndivo vakangwara, vakaomesesa uyezve vakaipisisa uye ane huwori hwakanyanya. Asi ivo vari yava kuda kuwanikwa uye Malone achafanirwa kutsanangura mushe nzira yaanoda kutevera uye, kunyanya, nzira yekurarama.
Kufa kwechando - Ian Rankin
Ndichangobuda Mhosva yekupedzisira yemuongorori wekuScotland John Rebus yakaburitswa pamusika musi wa25. Takanga tichiri kuzvirova rova Imbwa dzemusango. Iye zvino tadzoka munguva inotonhora zvikuru uye yakareba yechando muElinburgh uye Inspector Rebus vachatofanira kubata nhevedzano ye zvisingazivikanwe zvisingazivikanwe izvo zvinotungamira kune zvakanyanya matunhu epamusoro ezvematongerwo enyikaIzvo zvisingasvikike kuitira kuti ruramisiro isvike kwavari. Asi isu tiri kutaura nezveRebus ...
Icarus - Deon Meyer
Isu tatove tawana zita rechitatu remuongorori weSouth Africa Benny griessel. ari kuwanikwa kwemutumbi wakavigwa mudhorobha reKapa dzinenge paKisimusi ichave iri nyowani Griessel kesi, iyo isiri kupfuura panguva yayo yakanakisa.
Iyi nyowani nyowani yave iri yaifunga yakanakisa akateedzana, uko mabhizinesi anosanganiswa paIndaneti zvine fashoni nezve alibis yekusavimbika, hupfumi hutsva uye mbichana mbichana dzemhuri huru dzinogadzira waini yeguta. Kune izvi zvinowedzerwa a mufananidzo wakanaka wepfungwa yeve protagonists uye yenzanga yakavapoterera.
Dendere remhungu - Andrea Camilleri
Chikamu chemakumi maviri neshanu kubva pamutungamiriri Montalbano wekusingaperi Andrea Camillery. Zvekare isu tinogona kunakidzwa neakasarudzika pfungwa yekuseka kwemunhu uyo ​​atove anopfuura muenzaniso wekuziva mararamiro Mediterranean. Ino nguva Montalbano ichaona kuti iyo chitarisiko chechitunha chemunhu anoita kunge akanyarara ichava imwe yenyaya zvakanyanya kusanzwisisika uye zvakaoma yebasa rake.
Imba yeNazi - Xavier Quiroga
Iri zita rave Yekupedzisira nhoroondo yeiyo Gala do Libro Galego Mubairo uye anokunda Archbishop weSan Clemente Mubairo yenyaya yakanaka kwazvo. Uye chirevo chinonakidza: rondedzero ine chaiyo uye inofungidzirwa zvinhu nezve iyo kubhururuka kuburikidza neGalicia, uye pasi pehutongi hwaFranco, hwevaNazi vazhinji mushure mekuguma kweHondo Yenyika Yechipiri.
Iyo protagonist ndeye tekisi mutyairi ane mweya wemutikitivha uye muverengi mukuru uyo anogamuchira kutumirwa kwechiremera wezvematongerwo enyika weGalician uye muzvinabhizinesi: kuburitsa inofungidzirwa yapfuura yeNazi iyo vavengi vake vanogona kumurondedzera nayo.
Yakanyorwa mumvura - Paula Hawkins
Dzokera Paula hawkins mushure Musikana ari muchitima. A new Chakavanzika pakati pehanzvadzi mbiri, Nel naJules Abbott. Mazuva mashoma asati afa, Nel aifonera hanzvadzi yake Jules, asi haana kuita hanya naye. Nel anofa mune izvo zvinofanirwa kunge kuzviuraya nekusvetukira murwizi. Jules achadzokera kudhorobha diki kwaakambopedza zhizha achiri mudiki kuchengeta mwanasikana wechidiki akasiiwa nasisi vake. Asi Jules anotya, kunyanya zvemvura.
Mutumwa - Sandrone Dazieri
Uye iyo Italian zvakare inodzoka Sandrone Dazieri mushure mekubudirira kwenyika dzese Hausi wega. Ivo vamwe vaongorori Colomba Caselli y dante tower zvino vanozozvipira kuna mhosva wave kuti munhu wese anofunga nezve basa ra ugandanga. Dante anoenderera mberi nema manias ake uye phobias uye anotanga kuratidza zviratidzo zvekushushikana kwakasimba. Uye Colomba anoenderera nehasha dzake dzisingadzoreki uye akabvisa mumuviri. Asi pamwe chete vanoumba a kudarika timu inokwanisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » 7 matsva ematsotsi emhando yekumirira zhizha
Adrian Villagra Vicens akadaro
Ini ndinofunga nzira yekushanda inofanira kujekesa kuti uwane bhuku raunoda.
Pindura Adrián Villagra Vicens
Juan Goytisolo akashaya nezuro aine makore makumi masere nemasere ekuberekwa
Zvinyorwa zvemuAfrica: Zvese zvinowira pasi, naChinua Achebe